सामाजिक सुरक्षा कोषसंग बैंकरहरुका अनुत्तरित १५ प्रश्नहरु « Artha Path
सामाजिक सुरक्षा कोषसंग बैंकरहरुका अनुत्तरित १५ प्रश्नहरु
मनोज ज्ञवाली, नायब महाप्रबन्धक, नबिल बैंक
14.रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिएन लौ न हजुर भनेर गुहार गर्न जाने ठांउ SSF हुनुपर्ने मा कुनै हालतमा SSF मा दर्ता नगरिदिनुहोला भनेर रोजगारदाता कहां गुहार गर्नुपर्ने स्थीती किन सृजना भएको छ?
15.सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सहि हो। कैयौ श्रमिकहरु शरीरमा बल र काम गर्ने क्षमता होउञ्जेल काम गर्ने खाने अनी अशक्त हुदा घर परिवारकै बिचल्ली हुने। घरको कमाई गर्ने मुल मान्छेको मृत्यु हुदा बाँकी परिवार सदस्यको बिचल्ली हुने। कमाइले बुढेसकालसम्म सहारा नदिने । यो सबै समस्याहरूबाट श्रमिक तथा उनका परिवारलाई सुरक्षा दिने उधेश्यको बिचमा कोषले नै कमाउने र श्रमिकको पसिनाले कोषको भण्डार बढाउदै लाने लक्ष्य पनी राख्दा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ। यो कोषको अवधारणा साँच्चै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गराउंदा यसबाट कमाउने उधेश्य राखेर कार्यविधि बनाउदा समस्या उत्पन्न भएको मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, यो कुनै एक क्षेत्रका श्रमिकबाट उठाएर अर्को क्षेत्रका श्रमिकलाई बाड्ने हिसाबले या श्रमिकबाट पैसा उठाएर कोषमा भण्डारण गर्ने उधेश्यले अघि बढ्न हुदैन। सामाजिक सुरक्षा भनेर यो बर्ष मात्रै रु. 1 खर्ब बजेट छुट्याएको जस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी र योगदान गर्नुपर्छ। श्रमिकको योगदान भन्दा प्रतिफल बढि र सुरक्षित हुने कुराको प्रत्याभुति प्रदान गर्नु सक्नुपर्छ अनी पो कर्मचारीहरू जयजयकार गर्दे कोषमा दर्ता गराउन रोजगारदातालाई नै दबाब दिन्छन नी। हैन र?यी प्रश्नहरूको कोष, रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता बीच छलफल हुनु र समाधान निकाल्न जरुरी छ ता की यो कोषको वास्तविक लक्ष्य हासिल हुन सकोस र कोषलाई श्रमिकहरुले आफ्नो सुरक्षा कोष सम्झिन सकुन।
मनोज ज्ञवालीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट।
Tags : #नबिल बैंक #सामाजिक सुरक्षा कोष